Aprily 2, 2009 amin'ny tolotra 5 Comments
Io dikan manampy ny vahaolana ho an'ny fanohanana MediaWiki 4.1. Raha ny dikan-niasa teo aloha tsara ho anao tsy misy ilaina ny hanatsarana.
Te hisaotra inona ary Julian noho ny fanampiana debugging mamitaka io olana.
Martsa 31, 2009 amin'ny tolotra 3 Comments
Ankehitriny isika hanafahana Bible 0.1.2.
Tsy misy endri-javatra vaovao ao amin'ny famotsorana ity, fa izany no maneho ny fehezan-dalàna fototra mafy orina kokoa noho ny fanehoan-kevitra sy ny tatitra avy amin'ny mpampiasa.
Mamporisika anareo izahay mba hizaha toetra azy io, ary toy ny mahazatra – manome antsika hevitra.
Martsa 24, 2009 amin'ny tolotra Leave a Comment
Vao roa andro taorian'ny 0.1.0 efa nanapa-kevitra ny hamoaka 0.1.1, misy na inona na inona lehibe amin'ny famotsorana ity – fa noho ny sasany tsara dia nahazo Feedback, izahay afaka hamaha haingana ny olana sasany
Toy ny mahazatra – ianao dia nandray ny misintona azy sy hizaha toetra azy eo amin'ny toerana.
ary tsarovy! isika eto mba hanampy 😉
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: tsy ampy taona, fanafahana
Martsa 22, 2009 amin'ny tolotra 1 Comment
Ankehitriny isika hanafahana Bible 0.1.0, the most notable changes for this release is the support for an automatic translation mode which will translate all the content on the page to the target language without user intervention. This serves as a base for human translation to improve the results (and they need it!).
Nametraka Under: Release filazana Tagged Miaraka: fanafahana
Misy endri-javatra vaovao ao amin'ny 0.0.3
Martsa 7, 2009 amin'ny tolotra 3 Comments
Ankehitriny amintsika ny hisaorana ny vaovao dikan-manampy ny fanohanany endri-javatra roa. Ny voalohany dia ny fahafahana hahazo nadika RSS Feeds, ny mpampiasa rehetra mila atao dia misoratra anarana any amin'ny fahana eo amin'ny voadika pejy.
Ny endri-javatra faharoa dia ny fanatsarana ny fandikan-teny interface tsara izay mamela ny mpandika teny mba soso-kevitra avy amin'ny ordinatera fitaovana (amin'izao fotoana izao niara-niasa tamin'ny Google mandika) ary mampiasa azy io ho toy ny mpanampy ny fandikan-teny ho an'ny dingana.
Izahay mbola tena misokatra ny soso-kevitra, mifandraisa aminay fotsiny.
Update – 08/03 – Na iza na iza miaina fametrahana olana, mandra-amintsika ny hisaorana ny manaraka dikan-, azafady hametraka Version 0.0.2 voalohany, ary noho ny hanatsarana ny 0.0.3
Nametraka Under: Software Updates Tagged Miaraka: dikanteny google, fanafahana, RSS